Ihe aha pụtara »Akwụkwọ ọkọwa okwu gọọmentị nke ihe ọ pụtara na mmalite ya
Aha Bekee na aha nna
Aha ndị Ijipt
Aha ndị China
Aha ndị Japan
Namesmụ agbọghọ aha
Aha ụmụ nwanyị nke Akwụkwọ Nsọ
Mụ nwoke aha
Aha ụmụaka ama ama
Aha Bible maka ụmụ nwoke
Aha maka nkịta
Aha nkịta ama ama
Aha maka nkịta chihuahua
Aha nkịta Pitbull
Aha maka obere nkịta
Aha maka nwamba
Aha ndị nwamba Ijipt
Aha nwamba ama ama
Meaning nke Ana
Meaning nke Paula
Gịnị ka aha mbụ Sara pụtara
Meaning nke Sofia
Gịnị ka aha nna Laura pụtara?
Meaning nke Alba
Aha site n'akwụkwọ ozi
Site na A.
Site na B.
Site na C.
Site na D.
Site na e
Site na F.
Site na G
Site na H.
Site na m
Site na J.
Site na K
Site na L
Site na M.
Site na N
Site na Ñ
Site na O
Site na P
Site na R
Site na S.
Site na T.
Site na U
Site na V
Site na X
Site na Y
Site na Z
Pụtara aha - Ọkọwa okwu nke aha
Ma amaghi ihe ahu ihe aha gị pụtara? Ị chọrọ ịma ebe o si bịa na ebe ọ si malite? Ma ọ bụ ị nwere ike ịchọrọ aha nwa gị nwoke?
Na agbanyeghị ihe kpatara ị jiri chọpụta ihe aha pụtara, ị nọ na ibe kacha mma ịchọta ya. Gbanye www.meanings-names.com anyị na -enye gị akwụkwọ ọkọwa okwu gọọmentị aha nwere ihe ha pụtara na mmalite ha.
Na webụsaịtị ahụ ị ga -ahụ ọtụtụ aha na ihe ha pụtara. Ị ga -enwe ike ịmata mmalite, akụkọ ihe mere eme, ndị nsọ, yana ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ. Anyị na -ewetara gị ndepụta nke ndị ama ama nwere aha ahụ.
1 Kedu ihe aha gị pụtara?
2 Ndepụta aha AZ
3 Kedu ihe ị ga -atụ anya ya na webụsaịtị pụtara?
4 Kedu ihe ị ga -ahụ na ihe aha pụtara?
5 Chọta ihe nwa ọhụrụ, aha nwata nwoke na nwa agbọghọ pụtara, n'efu
6 Isnde dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
6.1 Grik, Latin na bekee, mmalite aha
7 Gịnị kpatara m ji nwee mmasị ịmata ihe aha ndị a pụtara?
7.1 Ị dabala na njigide ịhụnanya
7.2 Ị maghị ihe ị ga -akpọ nwa gị nwoke?
7.3 Ịmara ihe aha gị pụtara, ị ga -enwe ike ịmata onwe gị nke ọma
Kedu ihe aha gị pụtara?
Anyị nwere katalọgụ sara mbara nke nwere narị narị aha maka uto ọ bụla. Enwere ọtụtụ aha n'asụsụ Spanish mana anyị na -enyekwa aha n'asụsụ ndị ọzọ dịka Bekee, French, German, Basque ma ọ bụ Catalan, iji nye atụ ole na ole.
Ma ị na -achọ aha ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ nke ọdịnala, ọ bụrụ na ịchọrọ aha dị mkpirikpi - nke mara mma nke ukwuu afọ ole na ole gara aga - ma ọ bụ na ị masịrị aha ogologo, na webụsaịtị a ị nwere ike ịchọta ihe ị na -achọ.
Anyị nwekwara aha isiokwu maka anu ulo na anụmanụ dịka aha nkịta ma ọ bụ aha nwamba. Ọ nwere ike iyi ihe dị mfe mana ịhọrọ aha anụ ụlọ gị nwekwara nsogbu ya ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị nwe ụlọ chọrọ ịhọrọ aha onye ibe ha dabere na nha ha, ụcha akpụkpọ ahụ ha ma ọ bụ agwa ha.
N'okpuru ị nwere ike ịhụ a ndepụta aha zuru oke sitere na AZ, iji mee ka ọ dịrị gị mfe iji weebụ wee chọta aha ị na -achọ ngwa ngwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchọta ozi niile gbasara aha aha ị na -achọ, naanị ị ga -ahọrọ mkpụrụedemede achọrọ wee pịa ya.
Ndepụta aha AZ
Aha ndị malitere na A.
Meaning nke valvaro
Gịnị ka aha mbụ Alice pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Alberto pụtara?
Meaning nke Adriana
Gịnị ka aha nna Adrian pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Antonio pụtara?
Gịnị ka Andrés pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Alexander pụtara?
Gịnị ka aha nna Andrea pụtara?
Aha ndị malitere na B.
Gịnị ka Blanca pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Barbara pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Bruno pụtara?
Gịnị ka aha nna Beatriz pụtara?
Meaning nke Benjamin
Aha ndị malitere na C
Gịnị ka aha mbụ Cristina pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Claudia pụtara?
Gịnị ka aha nna Carmen pụtara?
Gịnị ka Cristian pụtara
Gịnị ka aha nna Carolina
Gịnị ka aha mbụ Camila pụtara
Meaning nke Carlos
Aha ndị malitere na D.
Gịnị ka aha nna Dylan pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Diana pụtara
Ihe nke Diego pụtara
Meaning nke aha Daniel
Aha ndị malitere na E
Pụtara Esther ma ọ bụ Esther
Gịnị ka aha nna Elena pụtara?
Meaning nke Enrique
Gịnị ka aha mbụ Emily pụtara
Gịnị ka aha mbụ Erika pụtara?
Meaning nke Emma
Meaning nke Eduardo
Meaning nke Elizabeth
Aha ndị malitere na F
Meaning nke Fabiola
Meaning nke Fabian
Gịnị ka Felipe pụtara?
Gịnị ka Francisco pụtara?
Gịnị ka Fernando pụtara
Pụtara nke Fernanda
Aha ndị malitere na G
Ihe nke Jenesis pụtara
Gịnị ka aha mbụ Gustavo pụtara?
Ihe aha Guillermo pụtara
Gịnị ka aha mbụ Gael pụtara?
Meaning nke Gabriela
Aha ndị malitere na H
Gịnị ka aha nna Hugo pụtara?
Ihe Hector pụtara
Aha ndị bidoro na m
Meaning nke Isaac
Pụtara Ignacio ma ọ bụ Nacho
Gịnị ka aha mbụ Ivan pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Isabel pụtara
Gịnị ka Iker pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Ian pụtara?
Aha ndị malitere na J
Gịnị ka aha mbụ Jessica pụtara?
Meaning nke Jennifer
Gịnị ka Jonathan pụtara?
Ihe Jizọs pụtara
Meaning nke Javier
Gịnị ka aha mbụ Jorge pụtara?
Pụtara nke Juan
Aha ndị malitere na K
Meaning nke Kiara
Meaning nke Karina
Gịnị ka aha mbụ Katherine pụtara?
Gịnị ka aha nna Karla pụtara?
Meaning nke Karen
Aha ndị malitere na L
Meaning nke Luna
Meaning nke Lucas
Gịnị ka aha mbụ Lorena pụtara
Meaning nke Lucia
Gịnị ka aha mbụ Luis pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Lía pụtara
Aha ndị malitere na M
Meaning nke Miriam
Pụtara nke Marcos
Gịnị ka aha mbụ Monica pụtara?
Gịnị ka Martina pụtara?
Gịnị ka aha nna Martin pụtara?
Meaning nke Miguel
Meaning nke Mateo
Meaning nke Manuel
Aha ndị malitere na N
Aha nwere Ñ
Ihe Noa ma ọ bụ Noa pụtara
Gịnị ka aha mbụ Nicole pụtara
Pụtara nke Nicolás
Meaning nke Natalia
Aha ndị malitere na O
Meaning nke Omar
Meaning nke Oscar
Aha ndị malitere na P
Gịnị ka aha mbụ Paulina pụtara
Gịnị ka aha mbụ Pamela pụtara
Gịnị ka Pablo pụtara?
Pụtara nke Paola
Aha ndị malitere na R
Ihe aha Roberto pụtara
Gịnị ka aha mbụ Rafael pụtara?
Gịnị ka aha nna Rodrigo pụtara
Meaning nke Rosa
Meaning nke Ricardo
Meaning nke Rocío
Gịnị ka aha mbụ Raúl pụtara?
Aha ndị malitere na S
Gịnị ka aha mbụ Susana pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Silvia pụtara?
Gịnị ka aha nna Sergio pụtara?
Gịnị ka aha mbụ Sandra pụtara
Gịnị ka Sebastian pụtara?
Aha ndị malitere na T
Meaning nke Tania
Ihe nke Thiago pụtara
Aha ndị bidoro na U
Meaning nke Uriel
Aha ndị malitere na V
Veronica pụtara aha
Gịnị ka Vanessa pụtara?
Meaning nke Victoria
Gịnị ka aha nna Valeria pụtara?
Nweta Valentina pụtara
Aha ndị malitere na X
Meaning nke Ximena
Aha ndị malitere na Y
Meaning nke Yesenia
Aha ndị malitere na Z
Gịnị ka aha mbụ Zoe pụtara
Kedu ihe ị ga -atụ anya ya na webụsaịtị pụtara?
Na ibe a, ọ bụghị naanị na anyị ga -enye gị ihe aha gị pụtara. Anyị bụ webụsaịtị ntụnyere na ụgbụ, nwere ike ịnye gị ozi karịa naanị nkọwa dị mfe.
Kedu ihe ị ga -ahụ na ihe aha pụtara?
Mmalite. Kedu akụkọ metụtara aha gị? Kedu ihe bụ usoro ọmụmụ? Ị ma mgbọrọgwụ asụsụ ọ si? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere aha gị, ọ ga -abụrịrị iwu ịmalite ịmụ banyere mmalite ya na akụkọ ntolite.
Ụdị. Ọ ga -amasị gị ịmata ụdị agwa ị kwesịrị inwe dịka aha gị siri dị? Ịhụnanya ihunanya ọ̀ karịrị gị? Ị kwesịrị inwe mmekọrịta maka ndị mmadụ dabere na aha gị? Ị ga -enwe ihu ọma n'ịhụnanya? Na webụsaịtị a ị nwere ike nweta ozi ndị ọzọ gbasara ebe ị na -aga.
Ndị nsọ. Know mara mgbe ọ bụ onye nsọ gị, ma ọ bụ nke enyi gị ma ọ bụ onye pụrụ iche? N'ebe a ị nwere ike mee ka ọ dokwuo anya ma mara ụbọchị onye nsọ gị.
Ama na otu aha. Kedu ndị ama ama akpọrọ aha gị? Ọ ga -amasị gị ịkpọ nwa ọzọ gị aha arụsị gị? Enwere aha ndị ama ama nke ị nwere ike ịdabere na ya ... na -ejikwa aha ndị ama ama bụ ihe na -ewu ewu mgbe niile.
Mbelata (ihu abụọ): Ha bụ aha ndị a na -eji dị ka ihe nnọchianya nke ịdị nso, ọbụlagodi ndị kacha nso na -ejikarị ya eme ihe karịa aha n'onwe ya. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ndị ama ama na nke kachasị n'asụsụ Spanish.
Curiosities. Aha kwesịrị ekwesị abụghị naanị na -edebe akụkọ zuru oke n'azụ ha, kamakwa ụdị enigmas niile ga -eme ka anyị nwee ume. Ụfọdụ abụrụla akụkụ nke emume ndị nna ochie kemgbe mmalite nke oge, ha na chi dị iche iche, okirikiri ala, obodo na -ejikọ ma bụrụkwa mmụọ nsọ ịkpụ nnukwu ọrụ mmadụ. Na webụsaịtị a, ị ga-enwekwa ike ịchọpụta ozi a n'ihi meaningados-nombres.com.
A sụgharịrị aha gị n'asụsụ ndị ọzọ? Ị ma ma ọ bụrụ na o nwere ụdị Bekee? Kedu ka ị ga -esi dee n'asụsụ Italian, French ... ma ọ bụ ọbụlagodi n'asụsụ Russian? Ị chere na ị nwere ike ịmasị aha ahụ nke ọma n'asụsụ ọzọ? Anyị na -eme ka ọ dịrị gị mfe ka ị chọpụta.
Aha gị ọ dabara na nke onye otu gị?. Enwere aha ndị metụtara ndị ọzọ, ebe ndị ọzọ na -emegide ya kpamkpam. Anyị kwesịrị ịmara nke ọma ma mmadụ dabara ma ọ bụ obere ka ọ daa n'ịhụnanya, ịbanye na mmekọrịta ma ọ bụ ịma ma ọ bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ezie. Ọ nwere ike bụrụ na otu onye dabere ma ọ bụ obere dabere, ebe onye ọzọ nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ekwesịghị ntụkwasị obi, nke a nwere ike mara aha ya.
Numerology. A na -ejikọkwa aha na nọmba, ọnụọgụ ndị a na -emetụtakwa akụ na ụba. I kwesịghị ichefu nkọwa ndị a.
Lee ihe atụ ole na ole nke ihe anyị na -agwa gị: Pụtara Pedro y Meaning nke Sofia.
Chọta ihe nwa ọhụrụ, aha nwata nwoke na nwa agbọghọ pụtara, n'efu
Dịka anyị kwuchara, ọ ga -ekwe omume na ị na -achọ ihe aha pụtara ka ọ mara ma ọ kacha dabara nwa anyị n'ọdịnihu. Anyị ga -enwe mmasị nke ukwuu inweta ozi dịka o kwere mee iji mara ma ọ bụ nke ziri ezi.
Aha nwere ike ịmasị anyị nke ukwuu, mana anyị amaghị mmalite ya, mgbọrọgwụ ya, yana ozi a nwere ike ime ka ị gbanwee obi gị. Site na ịnweta ozi "na tebụl", ọ ga -adị mfe ịme mkpebi.
Chọta aha zuru oke ọ dị mfe ekele maka ndepụta ndị a:
Aha ụmụaka. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ aha nwa ọhụrụ, nke kacha ewu ewu na obodo anyị na mba ndị ọzọ, ndị ghọrọla ihe na -ewu ewu, nke na -adịghị ahụkebe nke ga -adọrọ uche anyị site na oge mbụ, ọgbara ọhụrụ, nke mbụ, nke edepụtara….
Aha ụmụaka izizi na mara mma. Ọ bụrụ na ịmaraworị na nwa gị ga -abụ nwa nwoke, mgbe ahụ ị nwere ike pịa ebe a chọpụta aha ndị mbụ. Ị ga -ahụ nhọrọ nke nhọrọ pụrụ iche, yana ihe ha pụtara. Anyị nwekwara aha Akwụkwọ Nsọ maka ụmụ nwoke y ama aha maka ụmụaka.
Aha nwanyị mara mma. Ma ọ bụrụ na ị maraworị na ọ ga -abụ nwa agbọghọ, ebe a ị nwere ike ịchọta echiche ga -enyere gị aka ịme mkpebi gị. Ị nwere ike ịhụ karịa ma ọ bụ obere aha ọgbara ọhụrụ, nke nwere ihe pụrụ iche, dị ụkọ, nke Akwụkwọ Nsọ, ya na ihe ọ pụtara, wdg.
Aha na asụsụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ aha na -atọ ụtọ n'asụsụ Spanish, ikekwe anyị nwere ike ịga maka otu n'asụsụ ọzọ. Ịhọrọ aha n'asụsụ ọzọ dị mgbagwoju anya karịa ka ọ dị, ebe ọ bụ na anyị agaghị ama kpọmkwem ihe ọ pụtara, ma ọ bụ ntụgharị gaa n'asụsụ ọzọ. Ebe i nwere ike ịhụ ezi ndepụta Aha Bekee na aha nnana katalogi, chinos, japanese, Hibru na n'ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ. Site na ịpị ụdị kwekọrọ, ha niile ga -amalite igosipụta.
Aha anụ ụlọ. Ọ dịkwa oke mkpa ịmara ka esi ahọrọ aha anụ ụlọ, karịa ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụ nke ị ga -eji n'oge ndụ ya niile. Nkebi a ga -enyere gị aka ịchọta Aha maka nkịta, oke bekee, nwamba, ma ọ bụ anụmanụ ọ bụla ọzọ i nwere. Ị ga -enwe ike ịnweta ọtụtụ echiche ga -enyere gị aka inweta ezigbo aha dịka njirimara nke obere enyi gị. Anyị nwekwara nha nke nwanyị ịchọta aha kacha mma maka nkịta y aha maka nwamba.
Isnde dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
Eziokwu bụ na onweghị aha ọhụrụ ewepụtara. Anyị nwere ike ikwu na imepụta ọtụtụ aha ka ọtụtụ, ọtụtụ afọ gara aga. Ihe anyị na -ahụ taa bụ mgbanwe nke aha ndị ahụ, n'agbanyeghị na enwere ụfọdụ na -abịakwute anyị n'ozuzu ha.
I nwere ike iche na ihe aha pụtara adịghị mkpa, mana ọ dị mkpa n'ezie. Ezigbo ihe nlereanya bụ aha Silvia, onye a nke na -ekwu "Nwaanyị Pụrụ Iche" ma nwee mgbọrọgwụ n'asụsụ Latin.
Grik, Latin na bekee, mmalite aha
Ọtụtụ aha ugbu a nwere mgbọrọgwụ Grik, Latin ma ọ bụ Anglo-Saxon. Na mbụ ị nwere ike ị gaghị enye ya mkpa, mana n'eziokwu ọ na -eme ya, na ọtụtụ. Dịka ọmụmaatụ, n'etiti aha niile Elena pụtara bụ otu n'ime ihe na -atọ ụtọ, n'ihi na ọ pụtara "Pụrụ iche", okwu sitere na Latin.
Ezigbo ihe atụ ọzọ iji ghọta mkpa ihe aha pụtara dị na nke pụtara Andrés Nke a nwere mgbọrọgwụ n'asụsụ Grik ma pụtara "ụjọ, nsọpụrụ."
Dịka ọmụmaatụ ikpeazụ, ndị Aha Ricardo, ọ pụtara "Eze dị ebube", na mgbọrọgwụ ya bụ German.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ihe aha pụtara N'onwe gị, ọ nweghị ihe ọzọ ị ga -eme karịa ịtụgharị na Koran ma ọ bụ Akwụkwọ Nsọ, wee hụ ka ha si na -agabiga na oge. Ugbu a, enwerekwa aha ndị dị ugbu a na -apụtaghị n'akwụkwọ ochie ndị dị otu a. Dịka ọmụmaatụ, aha nke Iker sitere na Obodo Basque.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata usoro ọmụmụ na mmalite aha, ọ dị mkpa ịlaghachi na holographs dịka Koran ma ọ bụ Akwụkwọ Nsọ. Agbanyeghị, enwere aha ndị ọgbara ọhụrụ ugbu a, ebe ọ bụ na ejiri ha mee ihe oge na -adịghị anya gara aga, dị ka Iker, nke malitere iji na Basque Country.
Gịnị kpatara m ji nwee mmasị ịmata ihe aha ndị a pụtara?
Ọ bụ ihe na -atọ ụtọ n'ezie ịmara ihe aha pụtara? Eziokwu bụ na ọtụtụ mmadụ na -eche na mba, na aha bụ naanị ya.
Ugbu a, ọ dị oke mkpa karịa ka ọ dị, na enwere ọtụtụ ihe kpatara ya. N'ebe a anyị na -amụ ụfọdụ n'ime ndị kacha mkpa.
Ma eleghị anya, ị nọwo na -eche kedu uru ọ bara ịma ihe aha pụtara… Mgbe ahụ ị nọ n'udo ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ anaghị eche maka ya na ndụ ha niile.
Ị dabala n'ime ska nke ịhụnanya
Isi ihe kpatara nke a na -achọkarị ihe aha pụtara Ọ bụ maka na mmadụ ọhụrụ batara na ndụ anyị ọ masịrị anyị. Site na ihe nke a pụtara, anyị ga -achọ ịmatakwu gbasara ya. Anyị ga -enwe ike ịma ụdị onye gị bụ ma ọ bụrụ na anyị dakọtara ma ọ bụ na anyị ekwekọghị.
Daalụ maka mmalite na ihe aha ndị ahụ pụtara anyị nwere ike chọpụta ka esi ada nzuzu n'ịhụnanya nye onye ahụ nke anyị nwere mmasị na ya. Anyị ga -ama ma atụmatụ anyị bu n'uche ga -arụ ọrụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị kwesịrị ịchọ nke ka mma.
N'ịhụnanya ihe ọ bụla na -aga, na ịmatakwu ụdị onye mmadụ, maka aha aha pụtara, nwere ike nyere aka karịa ka anyị chere. Ị nwekwara ike ịgwa anyị ụdị agwa gị dị ma ọ bụ ka ọ dị n'oge gara aga.
Were ya na ịchọrọ ịrata nwoke ma ihe aha ya pụtara ike, mmasị na ịrafu. Ọ ga -abụ na, ị attentiona ntị na njirimara ndị a, ọ bụ ya na -arafu gị. Agbanyeghị, enwerekwa aha ụfọdụ nke, dị ka ihe ha pụtara, nwere ike igosi na ihe isi ike nke imeri dị elu.
Ka o sina dị, ịmara ihe aha pụtara na -enyere gị aka ịmata ndakọrịta ya.
Ị maghị ihe ị ga -akpọ nwa gị nwoke?
Ịchọ ihe aha pụtara nwere ike inyere anyị aka ịchọta aha zuru oke maka nwa anyị nwoke n'ọdịnihu o nwa, inwe ndepụta nke echiche nke anyị nwere ike ime mkpebi anyị na ya.
Anyị na -ekwu maka mkpebi dị oke mkpa, ọ bụkwa ya nwa ahu ga -aza aha ahu ruo mgbe ebighi ebiỌ ga -akọwa ụdị onye ị bụ na etu ụwa ga -esi ahụ gị.
Ọbụghị naanị ka '' ka o si ada '' ga -eduzi anyị, mana anyị kwesịkwara ịmụ mmalite, akụkọ ihe mere eme, usoro ọmụmụ, mgbọrọgwụ, yana nkọwa ndị ọzọ metụtara ya. Ị ga -enyochakwa ndị edemede dị n'akụkọ a ka akpọrọ aha n'otu ụzọ ahụ.
Ọ ga -enwe obi ike, na -akwụwa aka ọtọ, nwere ụkpụrụ igwe, na -eme ihere, na -ahụ n'anya, na -eme enyi, na -apụ apụ, na -eme enyi? Aha dị mma nwere ike ime mgbanwe.
Nhọrọ a na -ahụkarị bụ ịhọrọ maka aha bible. N'echiche a, lelee agwa dị na Bible nke nyere aha ahụ ndụ, yana ihe aha ya pụtara.
N'ime weebụsaịtị a, ị ga -ahụ ọtụtụ ndụmọdụ ga -enyere gị aka ịme mkpebi.
Ịmara ihe aha gị pụtara, ị ga -enwe ike ịmata onwe gị nke ọma
Ịmara ihe aha gị pụtara ga-enyere gị aka ime njem nke ịchọpụta onwe gị matakwuo gbasara onwe gị, ịmara ebe ndị ị na -eme nke ọma, ebe ndị ị na -adịghị eme nke ọma, nakwa àgwà ọ bụla ọzọ i nwere.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na ndị mmadụ anaghị ekwu okwu mgbe ha matara ihe aha ya pụtara, na ọ bụ na ha na -ahụ ụdị onye ọ bụ n'ezie.
Ọ bụrụ na ị maara onye ị bụ, ịnwere ike ịnabata onwe gị otu ahụ.
N'ikpeazụ, Ihe ọzọ mere i ji nwee mmasị n'ihe aha pụtara bụ na ị ga -achọ ịmata onwe gị nke ọma. Ịmụta ihe ọ pụtara ga -eme gị ọgaranya n'ime, anyị niile kwesịrị ịchọ ya opekata mpe na ndụ anyị.
Ọ bụrụ na ị na -ehulata ihu azụ iji mezuo ebumnuche gị, ị nwere ike nwee mmetụta dị iche ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, ebe ọ nweghị onye na -etinye ike dị ka gị. Ọ nwere ike bụrụ na, dịka aha gị siri dị, na ị nwere agwa nke ọ nweghị onye ọzọ nwere
Dị ka ị kwupụtara, ọ bụrụ na onye ma ihe aha pụtara, ị gaghị ahụ ebe ka mma karịa webụsaịtị a pụtara-names.com. Ị nwere ike ịnweta data a niile n'efu.
Ọ bụrụ na enwere aha anyị enweghị na webụsaịtị anyị, anyị na -akwado ka ị gosi anyị ya site na ngalaba kọntaktị nke ibe.
2022 | pụtara-nombres.com: akwụkwọ ọkọwa okwu gọọmentị nke aha & mmalite | Nke Ignacio Andújar dere